Manje abaningi ngokuvamile ezwa lo mbuzo: "Iyini indima kumiswa ubuntu ? Udlala umphakathi" Kodwa ngasizathu simbe abantu baqala ukucabanga ngalesi sihloko kaningi kunakuqala? Izwe lishintsha, umphumela wawo wonke umuntu - kakhulu. Ngakho ake sibheke nendima eyadlalwa umphakathi ekuthuthukiseni ubuntu. Kafushane uzama ukwethula wonke amaphuzu umbono, ukuthi kungenzeka.
I "ukucabanga ubudala"
Ngakho ake sibone ukuthi izingane nabantu abadala kanye nabantu ukunqotshwa ithonya kwabanye. Ngaphambili kwakucatshangwa ukuthi isimo lapho umuntu omncane e nesigcino amathonya ku ukuthuthukiswa yayo. Lokho, uma ingane ekuqaleni behlukene umphakathi, kuyoba kancane "ukushayelwa". Ngaphezu kwalokho, asikwazi kwakhiwa njengomuntu ngamunye. Kodwa lokho indima ekwakhiweni ubuntu udlala umphakathi, ngokuvumelana nalokho? Impendulo ilula - main.
Ngaphandle abantu ezungeze umuntu alinakuba umuntu uyalinganisela futhi uyaqonda okuthile okulimazayo ezihlotsheni zawo. Ngalokwehlukile, labo owakhulela emphakathini, abantu abanjalo izovela, njengoba sekuphawuliwe kakade, zasendle. Phela, kusukela ebuntwaneni abantu sizungezwe othile. Futhi ziba kusukela ulwazi imvelo bafana neziponji. Yebo, ngesikhathi bezoziphatha senzeka komphakathi kanye lithathelwe womuntu ekuphileni. Kodwa kunesinye, inguqulo kancane angajwayelekile lalo magazini.
Futhi ingabe okuhle?
Ngakho ukuthi iyoba yini indima ekwakhiweni ubuntu udlala umphakathi, ngokuvumelana omunye umbono ngale ndaba? Ake sizame ukuqonda.
Into wukuthi ukuthuthukiswa indoda imvelo yakhe sihlala sishintsha, futhi ngeke kushintshe. Nokho, e-yesimanje emhlabeni "imvelo" imiqulu ezingasho ekwehleni. Amanani Iningi zokuziphatha umane sekususwe. Ngakho, abantu abaningi ukukhohlwa ngalokho olwazini nasekuqondeni ingane ngokomoya nangokuziphatha okufanele athole. Ngakho kuthiwani uma ingane ingane emphakathini kabi futhi umbono wakhe ngokuphila ngeke uhlanekezelwe. Bazophinde yakha ngaphakathi spite of jikelele - evamile - izimiso zokuphila.
Ngakho-ke ngaso sonke isikhathi kuhle ekukhuleni komphakathi. Ngezinye izikhathi kungase abaphendula abantu ompunga mass, ku esigabeni samanje. Ngakho, asikho isidingo ukunikeza umuntu engakaze kwakhiwa nokho "isihe" azibonayo. Ukuze akhule kahle kufanele uyigcine "ilungelo" ithimba. Kulesi, lapho namanje inkolelo yokungafi zokuziphatha nezimiso. Manje asikhulume nawe mayelana lapho umuntu uthola ulwazi oluyisisekelo ukuze akha ubuntu.
Ngakho, liyini indima ebuntwaneni ekuthuthukiseni ubuntu? Njengoba ungase ukuqagela, le nqubo nje ubudala izingane efanayo futhi kudlala indima eqakathekileko. Into wukuthi, ukuzalwa, ingane namanje ayinakho umqondo wokuphila. Lezi akutholayo abazali bakhe kanye nalabo abaseduze naye. Ngakho ukuthi yakheke zonke nemibono ethile ekuphileni kwengane eminyakeni yobungane. kwakhiwa Uhlamvu, ezikhulayo psyche namandla esikhathini esifanayo. Uma izinto zingahambi kahle ngokuhamba imfundo, ungashiya i uphawu ongenakucimeka wokulingwa ekuphileni ikusasa kid.
Ngakho, ukunakekelwa okukhethekile kufanele zikhokhelwe abasebenzi kanye nabasebenzi izikhungo zemfundo, othumele ingane esikoleni noma Daycare. Abangane ababi noma onesimo sengqondo esingesihle, kungonakalisa umuntu umane indoda encane.
Ngakho, namuhla sifundile nendima eyadlalwa umphakathi ekuthuthukiseni ubuntu. Njengoba ubona, zikhona amaphuzu amaningana umbono, kodwa kufanele uthole umhlabathi ophakathi bakwazi ingasebenzi kahle ukunakekela imfundo yomuntu.
Musa unakwe sisondele kakhulu azungeze ingane noma, Ngakolunye uhlangothi, ukuba imenze baya yena. Uma une ukubhekisisa kahle abantu, maduzane uzokwazi ukuqonda ukuthi yini "okuhle" futhi liyini 'okubi " ngoba ukwakheka ubuntu. Zama njengoba kakhudlwana kungenziwa zikhokhelwe izindinganiso ezingokomoya nezokuziphatha, kanye nemfundo, bese ngisho kakhulu "ezingcolile" umphakathi ngeke esaba.
NoPrisila Chan njengoba samuntu iphupho American
UDiogenes. Wemigqomo ka uDiogenes njengendlela ukufeza ukuphila okuphelele